သင်၏ Samsung Galaxy ကို Android Pie ဖြင့် One UI Tuner ဖြင့်ပြုပြင်ပါ Androidsis
Manuel Ramirez | | Android ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ, Samsung
UI တစ်ခုကဆိုလိုသည် မတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက် Android Pie သို့အဆင့်မြှင့်ထားသော Samsung Galaxy အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထပ်ထည့်ပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုသည့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုရှိသည် status bar, အမြန် settings ကိုပြုပြင်မွမ်းမံ နှင့်မကြာသေးမီကအက်ပလီကေးရှင်းများပင်လျှင်ဖုန်းကိုကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့လက်တွင်ပိုမိုစွမ်းအားရှိလိမ့်မည်။
ဒီအတွက်ငါတို့ UI Tuner တစ်ခုကိုအသုံးပြုမည် နာမည်ကြီး XDA Developers developer တစ်ယောက်ထံမှ System Ui Tuner ကိုဖန်တီးသူ။ ယခုသူသည်ဤအက်ပလီကေးရှင်းကိုတီထွင်လိုက်ပြီဖြစ်ရာသင်ပြန်လည်သက်တမ်းတိုးလိုက်သောစိတ်ကြိုက်အလွှာ၏ရှုထောင့်အချို့ကိုနက်နက်နဲနဲစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး၎င်းသည် Samsung ၏လေးလံသောအလွှာများဖြစ်သော Touchwiz ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
1 One UI Tuner နဲ့ဘာလုပ်နိုင်လဲ။
2 Android Pie တွင် One UI Tuner ကို Download လုပ်နည်း
One UI Tuner နဲ့ဘာလုပ်နိုင်လဲ။
Zacharee1 သည်ဤ UI Tuner ဟုခေါ်သောဤ app ကိုဖန်တီးသူဖြစ်သည်။ သင်ဤ developer သည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအနည်းငယ်သိရန်သူသည်တစ်ချိန်တည်းမှာ XDA Developers တွင်အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည် သူသည်နှစ်ပေါင်းများစွာ Android အသိုင်းအဝိုင်း၏အလယ်အလတ်သမားဖြစ်ခဲ့သည် အများဆုံးအားဖြင့်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ သူ့အားဂုဏ်ယူစရာမှာ System UI Tuner အက်ပလီကေးရှင်းကိုတီထွင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား Android ၏အခြေခံကျသောရှုထောင့်များနှင့်ပိုမိုထိတွေ့ခွင့်ရစေသည်။
ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင် UI Tuner တစ်ခုရှိပြီး System UI Tuner ကဲ့သို့၎င်း၏ပန်းတိုင်မှာဖြစ်သည် တစ်ခုက UI ၏ interface ကို element တွေကိုအချို့ကိုစိတ်ကြိုက်။ Zacharee1 app အသစ်သည် Android Pie update နှင့်ဖယ်ရှားထားသောအင်္ဂါရပ်အချို့ကိုထည့်ရန် Samsung ၏ tema အင်ဂျင်ကိုအသုံးပြုသည်။
သူတို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းပြောဆိုနိုင်ပါတယ် status bar ကိုနာရီအတွင်းစက္ကန့်များ၏ activation သို့မဟုတ် Quick Settings တွင် header ကောင်တာကိုပြောင်းပါ။ အကောင်းဆုံးကတော့၊ Root အထူးအခွင့်အရေးကိုရယူရန်မလိုအပ်ပါ (သို့) အချို့သော ADB command များကိုသုံးရန်မလိုအပ်ပါ။ တစ်နည်းဆိုရသော် One UI နှင့် install လုပ်ခြင်းနှင့်ကစားခြင်းသည်သာဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က One UI ဖြင့် Samsung Internet ကိုအဆင့်မြှင့်ခဲ့သည်.
status bar ၏နာရီပုံစံကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။
Quick Settings header သည် Portrait နှင့် Landscape Mode အတွက်ဖြစ်သည်။
ဒီ app ကိုအဆင့်မြှင့်တင်မယ်လို့ပြောရမယ် သူတို့အားလျှို့ဝှက် settings ကိုရယူပါ One UI Tuner ကိုသုံးထားတာကြောင့်သင့်ကိုညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် XDA ဓာတ်ခွဲခန်း.
Android Pie တွင် One UI Tuner ကို Download လုပ်နည်း
သို့ XDA Labs မှလုပ်ရန်လိုသည့်အက်ပ်ကိုသုံးပါ။ ယခင်မျှဝေထားသော link သည်အတိအကျ XDA Developers forums များကိုကြည့်ရှုရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောလက်ကိုင်ဖုန်းဗားရှင်းကိုသုံးရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဒီ app က $ 1 ကျသင့်တယ် ဒါကိုဒီကနေကူးယူလို့ရပါတယ် XDA ဓာတ်ခွဲခန်း.
၎င်းကို download ကိုဖော်ပြသည့်လိမ္မော်ရောင်ခလုတ်မှဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။
သင်၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်သွားသည့်အခါ၊ အက်ပ်၏အပိုင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာများကိုသင်အသက်သွင်းသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သတိရပါ အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုထည့်သွင်းရန်သင့်အတွက်သတင်းစကားအပြောင်းအလဲများပါ ၀ င်သော၊
သူတို့အားရွေးချယ်စရာအချို့လိုအပ်သည်ပြောင်းလဲမှုများအကျိုးသက်ရောက်ရန်မိုဘိုင်းကိုပြန်လည်စတင်ပါသို့သော်၊ အနည်းဆုံး installation နှစ်ခုကိုလိုအပ်သည်။ ဤအချက်အလက်အားလုံးကိုအထက်ပါဖိုရမ်တွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်သင်လုပ်ထားတဲ့အပြောင်းအလဲအားလုံးနှင့်အတူသင်ဟာနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်နိူင်သည်။
မည်သည့်အကြောင်းပြချက်အတွက်မဆိုပြတင်းပေါက်တစ်ခုကသင့်အားမေးနေပုံရသည် ROOT အသုံးပြုခွင့်ကိုလက်ခံပါ၊။ အဲဒီ popup ကိုနောက်ခံအပြောင်းအလဲများကိုအသုံးချရန်အနာဂတ်မှာအသုံးပြုလိမ့်မည်, ဒါကြောင့်ယခုမှာသူ၌မည်သည့် function ကိုမှမရှိဘူး။
XDA Labs မှထုတ်လုပ်သူနှင့်အတူတူပင် UI Tuner တစ်ခုသည်၎င်း၏ပထမဆုံးဗားရှင်းတွင်ရှိသည် Android Pie သို့ One UI ဖြင့် update လုပ်ထားသော Samsung Galaxy ကိုသင်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းကိုအမြင့်ဆုံးစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်လိုပါကသင်၏အချိန်ကိုမဖြုန်းတီးပါနှင့်။ ၎င်းသည်ဒေါ်လာ ၁ ဒေါ်လာကျသင့်သော်လည်း Android developer တစ်ယောက်ထံမှလာသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » Android ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ » One UI Tuner ဖြင့်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ status Pie၊ အမြန်ချိန်ညှိခြင်းများနှင့် Samsung Pie ဖြင့် Android Pie ဖြင့်ပြုလုပ်ပါ
Galaxy M30: Samsung ရဲ့အလယ်အလတ်တန်းစားပြီးစီးပါပြီ
သင့်အိမ်ရှိမီးသီးများ၏အရောင်ကို Google Home မှမည်သို့ပြောင်းရမည်နည်း